Mandikuse kumzi-mveliso wethu wesitulo esigobekileyo ukhe ukhenkethe
ngu admin on 21-11-19
Iinkcukacha Namhlanje, mandikuthathe undwendwele umzi-mveliso we-bend rocking chair yethu. Kubandakanya indawo yokukhetha umthi, inxalenye yesakhelo, inxalenye yombala wepeyinti, kunye nokuveliswa kwendawo yokuhlala ephezulu, isiponji sikwasetyenziswa njenge ...
ngu admin on 21-10-27
Umoya opholileyo kunye nokufudumala kwekhaya I-IKEA ibonelela ngoluhlu olubanzi lwezinto zasekhaya ezintle nezisebenzayo ezinokufikelelwa ngabantu abaqhelekileyo. Isitayela segumbi lemodeli elidala lihambelana ne-aesthetics kunye neemfuno zolutsha. Le yi wort...
Kulixabiso lethu ukubonelela ngeemveliso zekhaya ezikumgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi kuluntu.
Luluvo lwethu lwexabiso ukubonelela uluntu ngoluhlu olubanzi lweemveliso zefanitshala ezintle nezisebenzayo. I-Yamason Furniture Furniture Co., Ltd. iya kuphuma ukutyelela kwaye ifunde inyanga nenyanga, ngeli xesha ndaya kwi-IKEA. I-IKEA inokushwankathelwa ngamagama ambalwa kuye wonke umntu...
Izolo, inkampani iququzelele ukutyelela kwinkampani yefenitshala yehlabathi i-IKEA. Okokuqala, ngokwendawo, ukusuka kuhola wendlela ophantsi kwe-viaduct, kwicala lasekunene, sabona isakhiwo somzi-mveliso wayo. Imibala emthubi nebhlowu echaseneyo inzima ...
Inkampani yethu ityelele i-IKEA ukufunda uyilo lwefenitshala yabo kunye nemidlalo ngoMgqibelo odlulileyo
Molo, nguNiki lo! Uhamba njani namhlanje? Inkampani yethu ityelele i-IKEA ngoMgqibelo ophelileyo ngomhla wama-23 ku-Okthobha 2021. Imeko yayo ikhululekile kakhulu. Makhe ndikubonise utyelelo lwethu ngaphandle kwe-IKEA. Ukusuka apha, sangena kwi-IKEA. Kukho abantu abaninzi abatyelela i-IKEA ngexesha elinye. F...
Igumbi lomboniso wefanitshala kunye nokusetyenzwa kweworkshop yohlobo lwefenitshala yaseYamasen
ngu admin on 21-10-19
Namhlanje siye kwigumbi lokubonisa ifanitshala esandula kwakhiwa kwaye sinika intshayelelo emfutshane kwifanitshala yethu entsha. Isitayile seNordic yefanitshala eyomeleleyo yomthi intle kwaye intle ngokwesitayile, nokuba yitafile yokutyela, ibhedi, isitulo sebar, itafile yekofu, ikhabhathi egotywayo yewayini, ...
Uphuhliso lwemveliso entsha-isitulo sokutyela
ngu admin on 21-10-08
I-Dining Chair I-backrest yenzelwe i-ergonomically kwaye ikhululekile ukuthembela kuyo, ikhupha uxinzelelo esinqeni. I-cushion yesitulo yenziwe ngelinen, ekhululekile kwaye iphefumula, inokuqina okulungileyo, kwaye ayidinwa emva kokuhlala ...
Ikhabhathi entsha yezihlangu zesiko
IKhabhinethi yezihlangu Le #ikhabhathi yesihlangu emnyango ingaphezulu nje kwekhabhathi yezihlangu. Inokusetyenziswa kwakhona njengeshelufu, kwaye unokubeka izinto zakho zobuqu, ezinjengeefowuni eziphathwayo, njengezitshixo emva kokungena emnyango. Ukongeza, le #ikhabhathi yesihlangu iza nayo...
IiMveliso eziNtsha ezi-5-iKhabhinethi yokuZima kweTV
Ikhabhinethi yokuma kweTV Namhlanje ndiza kukuthatha ukuba ubone iimveliso zethu ezi-5 ezintsha-iikhabhathi zeTV, zonke zenziwe nge-MDF, zilula kakhulu kwaye zifanelekile, kwaye kulula ukuzifaka. Lo mfanekiso ulandelayo ubonisa iimveliso zethu ezi-5 ezintsha ...
Yamazonhome New Surfboard
Ibhodi yethu entsha yokusefa ikwi-intanethi mva nje! Wonke umntu wamkelekile ukuthenga! Sonke siyazi ukuba i-surfing ngumdlalo ohlanganisa imisipha yomzimba wonke. Igcwele isantya kunye nomdla. Ukusefa kuneenzuzo ezininzi, phumza umoya, ikhonkco loxinzelelo, umthambo, kwaye wonwabele umzimba kunye...
Imveliso entsha yokucebisa-ibhedi
ngu admin on 21-09-11
Kutshanje, umzi-mveliso wethu uvelise iimveliso ezintsha, ingakumbi iimethi zetatami zaseJapan. Ezi bhedi zenziwe ngeelokha. Ukongeza, zinokudityaniswa neepedali, iidesika, iikhabhathi zeencwadi, iiwodrophu, njalo njalo. Loluphi uhlobo lwendibaniselwano onokuthi uyifanise, ukuba yakho...
Thatha ukuba undwendwele inkqubo yokwenza isofa yefektri yethu
ngu admin on 21-08-28
/uploads/1.mp4 Imveliso esiza kuthetha ngayo namhlanje yisofa. I-sofa yimveliso yefenitshala eyimfuneko ebomini bethu. Busebenza njani ubugcisa bakhe? Ngaba uyafuna ukwazi ubugcisa...
Makhe ndikuse kwisitulo sethu esigobileyo...